‘भेडा प्रवृत्ति’मा लगानी नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
सेयर बजारमा लगानी गर्दा एकोहोरो अर्थात भेडा प्रवृत्तिमा लगानी नगर्न अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले लगानीकर्तालाई सुझाएका छन् । लगानीकर्ताले जोखिम लिन नसक्ने भए म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने विकल्प दिँदै खतिवडाले सेयर बजारमा लगानी गर्दा अरुले जे गर्छ त्यही गर्ने भेडा मनोविज्ञान लिएर लगानी नगर्न सुझाएका हुन ।
धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा जोखिम वहन क्षमताका आधारमा नाफा र नोक्सानको भागेदारी बेहोर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए । अरुको भरमा लगानी नगर्न आग्रह गर्दे मन्त्री खतिवडाले भने, “भेडा प्रवृत्तिमा लगानी नगर्नुस् ।” बजारमा घाटा भयो भनेर सरकारलाई धारे हात नलगाउनु भन्दै उनले भने, “सरकारसँग नोक्सानका बेला मात्र दोष किन दिन हुन्छ ? तपाईको सेयरको मूल्य तोक्ने काम सरकारको हैन ।”
अर्थमन्त्री खतिवडाले धितोपत्र बजार प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै एक करोड पुँजी भएको लघुवित्त धितोपत्र बजारमा आउने तर ५० अर्ब नाफा कमाउने कम्पनी धितोपत्र बजारबाहिर हुने अवस्था अब नहुने बताए । धितोपत्र बजारको विकासका लागि पुँजी बजारबाहिर रहेका ठूला कम्पनीहरू आउन बाध्य पार्ने उनले बताए । “कुनै एक क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेर जोखिम न्यूनीकरण हुँदैन,” उनले भने, “लगानीकर्ताले पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारको तर्फबाट त्यस्ता संस्थाहरूलाई पुँजी बजारको दायरामा ल्याउने हो ।” नीजि क्षेत्रका कम्पनीलाइ सार्वजनीक कम्पनीको रुपमा स्थापना गर्न पहल गर्ने बताउदै खतिवडाले भने,“ंभएन भने बाध्य पार्छौं ।” मन्त्री खतिवडाले बैंक, बीमा तथा फाइनान्स र लघुवित्त संस्था मात्र धेरै सूचीकरण भएको भन्दै रियल क्षत्रलाई अनिवार्य रुपमा बजार प्रवेश गराई लगानीकर्ता र बजारको आकार बढाउनु पर्ने बताए । उत्पादनमूलक, अन्य व्यवसायसँग सम्बन्धित, सेवामुखी संस्थाहरू बजारमा किन आएका छैनन् भन्ने खेज्नु पर्ने सुझाव दिए ।
धितोपत्र बजार विस्तारको लागि आवश्यक पूर्वधारहरू विकासमा सकारले नियामकलाई सहयोग गर्ने उनले बताए । लगानी अनुकुल वाताबरण बनाउने काममा सरकार अग्रसर रहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सेयर बजार अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताए । अर्थतन्त्रमा आएको सुधारलाई सपोर्ट गर्ने पुँजी बजारले भएकाले बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुपर्ने बताए । “रियल सेक्टरलाई बजारमा ल्याउनु अनिवार्य छ,” गभर्नर नेपालले भने, “पुँजी बजार भनेको भविष्य सुरक्षीत गर्ने एउटै आधार हो ।” सेयर बजार धेरै संवेदनशील भएको भन्दै गभर्नर नेपालले भारतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको टसलका कारण पुँजी बजार निकै घटेको बताए । छोटो समयका लागि पुँजी बजार उयुक्त नभएको समेत उनले बताए । डा. खतिवडा अर्थमन्त्री भएपनि पहिलो पटक एउटै मञ्चमा देखिएका अर्थमन्त्री र गभर्नर सेयर बजारका विषयमा भने नकारात्मक नरहेको बताए ।
बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नेप्से, मर्चेन्ट बैंकर, धितोपत्र दलाल, सूचिकृत कम्पनी, बैंक वित्तीय संस्था तथा बिमा कम्पनीहरू सहभागी छन् ।
नेप्से सामान्य अङ्कले वृद्धि
नेप्से सात विन्दुले घट्यो